The sawirada ugu wanaagsan ee gudaha: 30 fotoprimerov
rinjiile - Oleg Solovyov
Waxa aad ku gadaneyso saliid rinjiyaynta on shiraac: top 20 tusaalayaasha wanaagsan
ugu weyn ee » news » The sawirada ugu wanaagsan ee gudaha: 30 fotoprimerov
Pictures for decoration gudaha aan ka bixin ee fashion. fanaaniinta isbedel, Hababka qoraal, meelaynta iyo joomatariga ah farshaxankiisa - canvases laakiin sii decoration ah oo caan ah gabi ahaanba qol kasta. Ka badan sidii hore, kaliya dadka hodanka awoodi kari waayay inay soo iibsadaan shuqullada sayidkooda. Haddaba doorashada waa weyn: asalka ah, nuqulo ka mid ah shuqulladii caan, masterpieces ah fanaaniinta fashion ama nuqul Ranjiilayaasha dahsoon, boodhadhka dhalaalaya.
Aan fiirino yar, sida loo xusho sawirka saxda ah, si aad qolka ayaa style shaqsi, fiiriyey oo xiiso leh iyo asalka.
Mid ka mid ah xeerarka ugu horeysay - xulashada ah farshaxankiisa, soo socda nidaamka midabka iyo qaabka, kaas oo qolka lagu qurxiyey. Dabcan, haddii aad leedahay dhadhan safeeyey iyo wax fikrad ah oo ku saabsan Qurxinta ah - hawsha aad xoogga. Haddii kale - la xiriir xirfadlayaasha. Waxay si sax ah u soo qaado maro saxda ah, dhameystir nuqul hufan qolka.
In waxa tahay in la sameeyo qurxinta derbiga?
Haddii artist ah sawir ee saliidaha, markaas dhar ah, duniyooyinka baguette weyn, dhammaataan dhigay off qaab classic ee qolka. Work in qaab fashion-uqabso ku qurxin karaa qol kasta.
qolalka, kuwaas oo koobabka style a Retro, ama farshaxanka pop, Waxay ku talinaysaa samaynta gudaha si aad u hesho sawir, rinji rinjiga looxa.
Qurux Bbc watercolor ama weli innoogu dhis ku haboon qaabka Provence, Foolxuno-dhimatay ama dalka.
muuqaallo kale. shaqada, sameeyey qaab farshaxanka, duniyooyinka ee dhalooyinka iyo jir goo, noqon highlight a of style ka dhowba.
Boodhkan. Qurxinta Simple iyo asalka, taas oo inta badan samaynta doorato meel ku-teknoolojiyad sare ama minimalism.
Haddii rinjiyeynta daabacan on shiraac, laakiin inta badan waa shuqulkii fannaaniin caan ah, shuqullada dunida-caan, waa kaliya raaxo ah khayaali ah.
Sawir - waa in kastoo aan foomka yaraa tahay, Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee sannadihii la soo dhaafay. shaqada ee sawir badan oo keeni jaceylka badan oo adduunka ah. sawiro shakhsi guryaha intooda badan waxaa lagu qurxiyey ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale shuqullada Sawir.
Iyadoo la macaamilooday ah farsamooyinka yar, hadlaan meeleynta saxda ah ee farshaxankiisa.
farshaxankiisa Modern dhismaha ama loo isticmaalaa sida decoration madax banaan, ama qayb ka mid ah sideeda oo ka sii adag.
Gaar ahaan si fiican u fiiri sawirka ka badan fadhiga, sidan oo kale si ay u sameeyaan qurxiyeyaasha isku dayaya in uu buuxiyo booska iyo guud ahaan isu dheelli gudaha oo dhan.
Haddii qolka ayaa xabadka ka mid ah u gura, markaas waxaad dooran kartaa isku-dar ah quruxda badan ee images dhowr. Gaar ahaan cajiib ah u eegi doonaa, haddii ay yihiin in la helo accessories xaq tahay in la dhamaystiro.
Shido - faahfaahsan, taas oo ku siinayaa qol kasta oo diiran oo raaxo leh. Sidaa darteed, jacayl gaar ah qaado sawir, caawin doona saamayn this.
derbiga Free qolka kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan gallery ah. Waxaa soo dhaweynta aad u caan ah oo ka mid ah samaynta Yurub. Waa maxay nuxurka? derbigii oo dhan waxaa ka buuxsamay farshaxankiisa kala duwan, boodhadhka, sawiro, karkan. dhibic, si ay u midba midka kale in la dhamaystiro, Waxaan ku jiray category la mid ah oo midabo la mid ah.
Armaajo - mid ka mid ah dhawr goobood oo caadi ah images tahay.
Maxaa gabagabo ah heshiis lagu tilmaamay goobaha Xuubabkoodu: xulashada sawirka iyo meesha goobaha ay, fiirso fikradda guud ee qolka, palette midabka iyo, sidoo kale, shakhsi door bidayso. Ma loo baahan yahay in meel images kuwa, in aan ka dhigi doonaa jawaab naftiinna. Dhamaan ranjiyaynta waa in loo Waxyoodo ahayn, farxin isha iyo qaadaan dareen gaar ah u tahay dadka qolka.
at ugu dambeeyey, qaar ka mid ah xeerarka iyo mabaadi'da xulashada ah farshaxankiisa for gudaha:
Haddii qolka waxaa loogu talagalay in a midabada si caddaalad ah cokan, in la barbardhigo, dhammaan sawirada qaado is dajiyaan. Taa waxaa ka duwan: midabyo dhammaataan tag leh oo ay derbiyo ku midabada dhexdhexaad ah. Waxaa jira xaalado, marka image uu jecel yahay in palette ah midab isku mid ah, sida deegaanka. Habka ugu soo baxay xaaladda la imaanayn doonaa jir. Ha iloobin xukunka: midabka madow yareeyo bannaan ee, iyo Nuur - ballaariyo.
Wehbe waaweyn, diyaarin vertical, habboonaanta iyo faa'iidada si ay u eegaan oo keliya qol leh saqafka sare. The shiraac guryaha caadiga ah meel horizontal. Laakiin si ay buux meel yar ma aha in.
Habka ugu fiican ee meel image ah in ay sidaa noqon, in barta dhexe ahayd heer indhaha.
image qaybsan heleen dadka aan caadi ahayn. maadooyinka kala duwanaayeen: oo dabiici ah in Bbc khiyaali. Waxay waxaa laga heli karaa guryaha, iyo xafiisyada. hannaankii qaybsan siin asalnimada gudaha iyo cibaaro.
By u geliya image aan la taaban karin, raac, si asalka ma booli iyo view of shiraac laftiisa. Ka dib markii nidaamyada oo dhan, gaar ahaan cad ah, oo ilaa image dahsoon iftiinka xun.
In la abuuro firfircoonida iyo qolka, sawirada asymmetrically diyaarin midba midka kale.
Waxaa muhiim ah in la fahmo xukunka ee aasaasiga ah: Image ayaa loo baahan yahay si ay u dhis ku haboon gudaha qolka si loo qurxiyey. Qurxinta gurigaaga u baahan yahay images farshaxanka - aad la abuuro jawi gaar.
Sale ah farshaxankiisa ee St. Petersburg, sawiro si aad u dalbato, gudaha rinjiyeynta.
Qiimaha rinjiyeynta saliid on shiraac. Qiimaha for sawir, muuqaallo kale, khad, gouache, warqad, farshaxanka pop, wax-uqabso, farshaxanka casriga ah, rinjiile.
Tusaalooyinka aan shaqada: rinjiyeynta | sawir | faylalka